I-Pasternak | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | March 2020
Konke okudingayo ukuze ukwazi ukukhula kwe-parsnip kusuka ensimini ensimini
Phakathi kwabalimi kunombono wokuthi ukukhula kwe-parsnip kusuka kumbewu kunzima kakhulu. Futhi konke ngoba inambewu ephansi yokuhluma - ayikho ngaphezu kwama-50%. Kukholelwa ukuthi lesi sici samnika okuqukethwe okuphezulu kwamafutha abalulekile. Ngaphezu kwalokho, angeke agcinwe okungaphezu konyaka. Kodwa-ke, uma wazi lezi zici futhi ubambelela ngokuqinile kwezobuchwepheshe bezolimo, ungathola imiphumela elindelekile.
Ukupheka ukuvuna i-parsnip ebusika
Njengezinye izitshalo eziningi, i-parsnip ibilokhu idumile ngezinzuzo zayo ezizuzisa ngisho nokuphulukisa. Lokhu kwaholela ekubeni khona kwezinqubo eziningi zokulungiselela. Ukupheka kwe-Parsnip kuyoba nesithakazelo esikhethekile kubantu ababhekene nezifo zenhliziyo, imithambo yegazi kanye nezitho zesistimu yokugaya. Ngaphezu kwalokho, isitshalo esicacisiwe sisebenza njenge-diuretic futhi singumsizi wokuqala we-colic, futhi abanye abantu bayayisebenzisa ngisho nokuvimbela ukukhanya.
Imifino ye-Pasternak: izakhiwo eziwusizo kanye nokuphikisana
I-Pasternak ingenye yemifino eyaziwa kakhulu edolobheni lethu. Lemifino ichazwa emndenini wase-Umbrella. Inani lalo likhulu ngokwanele ukuthi, kanye neqoqo eliyingqayizivele lezimfanelo eziwusizo, kwenza i-parsnip ibaluleke kakhulu ezindaweni eziningi zokuphila komuntu: umsoco, i-pharmacology yendabuko kanye nemithi yendabuko, i-cosmetology.